HS:- Kedib jahwareer siyaasadeed oo uu mudo 3 sano iyo ka badan geliyey siyaasadii wadanka m/weynaha Somaliya,ayna dowladahii mudadaas jiray iyo mida hada jirtaa dhamaantood ku fashilmeen in uu wadanku ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah,ayey hada u muuqataa in ay awoodii talo lagu gaari lahaa qaabkii ay doorasho la wada ogyahay dalka ugu dhici laheyd ay dib ugu laabaneyno baarlamaanka federalka.
Kulan ay iskugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka ayey cod aqlabiyad leh ku kala direen shirkii Madasha qaranka ' fariin culus a loo diray madaxda ugu sareysa oo midkii jabiyo amarkooda na ay xilka qaadis ku sameyn doonaan,sida aanu xog xaqiiqo ah ku heyno.
Shirka Kismaayo ayey wararku sheegayaa in ay ujeedkiisu tahay sidii awooda golaha shacabka looga saari lahaa meesha dhan,iyadoo uu arinkaas safka hore uga jiro madaxweynaha Somaliya.
Go'aan kaan baarlamaanka ay ku kala direen shirkii loogu yeeray Madasha qaran shacabka Somaliyeedse u bixiyey ujeedo badan ayey u badan tahay hadii ay madaxda sare u hogaansami waayaan dalka baarlamaanka in ay xilkooda ku waayi doonaan.
Xaalada ayaa aad uga xun madaxweynaha Somaliya maadaama isbuuc ugu horeeya sanadka cusub uu wadanku lugaha la galay isbedelo waaweyn oo suurogelin kala in ay awooda siyaasadeed ee hada jirta iskugu biyo shubto golaha shacabka hada jira hadey muujiyaan isku duubnina ay macquul tahay in aanba loo baahan shirarkaan ay hada diideen,caalamkuna hadii ay muujiyaan awood ooda baarlamaanku waxaa imaan doonta in loo sameeyo mudo kordhin.
Sida muuqata arintaan ayaa meesha ka saari doonto heshiis hoose oo dhax maray wakiilka QM ee waqtigiisa dhamaaday Nikols Key iyo Xasan
Sh kaasi oo ahaa sidii shirka 10 ka Jana ayo awooda golaha shacabka meesha looga saari lahaa.
Hadii shirkaas inuu Kismaayo ka furmo golaha shacabka oo kala diray m/weynaha Somaliya si sahlan ayuu xilkiisa u waayi doonaa ,sida aanu xogta ku heleyno.
· admin on December 31 2015 09:00:11 · 0 Comments · 1012 Reads ·
14,905,994 unique visits